Simplehuman Sensor Mirror with 5x Magnification - Professional Beauty - Buy today at For Myanmar Online Store
chevron_right Electrical Beauty
chevron_right Professional Beauty
chevron_right Simplehuman Sensor Mirror with 5x Magnification
Simplehuman Sensor Mirror with 5x Magnification
The Simplehuman BT1080 sensor mirror lights up automatically as your face approaches. Its 5x magnification is ideal for exceptional detail. It featuresawireless design and one charge lasts up to5weeks.
Its tru-lux light system simulates natural sunlight, allowing you to see full colour variation, so you'll know when your makeup is colour-correct and flawless. And unlike traditional bulbs, the long-lasting LEDs won't burn out or diminish even after many years.
Simplehuman designed it to be cordless, so there are no messy cords cluttering up your counterspace. It easily recharges with the included USB cord and plug adapter, and one charge lasts up to5weeks. 5x magnification — ideal for providing exceptional detail while still allowing you to see your entire face at once.
အမျိုးသမီများ အလှပြင်အထူးအသုံးဝင်တဲ့ Sensor Mirror
American နိုင်ငံမှ SimpleHuman မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ LED Sensor Mirror ဖြစ်ပါတယ်။ Sensonr နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် မှန်ရှေ့မှာလူရောက်ရှိလာတာနဲ့ သူ့အလိုအလျောက် မီးလင်းလာမှာပါ။ 5x Magnification ဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာကို ၅ဆ ချဲ့ကားပြီး အသေးစိတ်မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်နေရာမှာ မိတ်ကပ်လိုနေသလဲ ၊ မျက်ခုံးမွေးဆွဲတံမှချော်ထွက်မှု ၊ အမွှေးအမျှင်တွေကအစ အသေးစိတ် မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပွဲလမ်းမထွက်မီ ၊ အပြင်မထွက်ခင် သေချာပြင်ဆင်ခွင့်ရရှိမဲ့ မှန် လို့ပြောရင်မမှာပါဘူး။
Simplehuman ရဲ့ tru-lux light system ဟာ သဘာဝနေရောင်ခြည်နီးနီးထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက် အခြား မီးများနဲ့မတူပဲ အသားရည်ပေါ်မှာ မိတ်ကပ်များရွင်း မှုများကို သေသေချာချာမြင်နိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Feature တွေကတော့
600 Lux ထုတ်ပေးပြီး Colour Rendering Index (CRI) 95 မှာပါ။ Tru-lux Light System က အခြားမီများထက် နှစ်ဆလင်းစေမှာဖြစ်ပြီး သဘာဝအလင်းရောင်ရဲ့အနီစပ်ဆုံးရစေမယ်လို ဂတိပြုထားပါတယ်။
အလိုအလျောက် Sensor ပါတဲ့အတွက် မှန် ရှေ့မှာ လူရပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလိုမီလင်းလာမှာဖြစ်သလို ၊ လူမရှိတော့တာနဲ့ မီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းလွယ်ကူအောင် လုပ်ထားတဲ့အတွက် ခလုပ် ဆိုတဲ့အရာကို ကြာရင်မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။
သာမန် မီချောင်းတွေ မီသီးတွေဟာ ကျွမ်းသွားပါတယ်။ သိပ်ပြီးအကြာကြီးမခံတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ မီအားမမှန်တာမျိုး မီဆောင့်တက်လာတာမျိုးတွေလဲပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Siimplehumber Led ကိုတော့ ဒီလိုအကြောင်းမျိုးတွေကနေရှောင်ရှားစေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နာရီ 40000 ( လေးသောင်း) ကျော်သွားတာတောင် အသစ်အတိုင်းပဲလို့ သုံးစ္စဲသူတွေက ပြောထားတာတွေရှိပါတယ်။ နာရီလေးသောင်း ဆိုရင် နှစ် ဘယ်လောက်သုံးစွဲနိုင်မလဲဆိုတော့
တရက်ကို ၁ နာရီသုံးရင် နှစ်ပေါင်း ၁၁၀ ကျော်သုံးနိုင်ပါတယ်။
တရက်ကို ၂ နာရီသုံးရင် နှစ်ပေါင်း ၅၉ နှစ် သုံးနိုင်မှာပါ။
တရက်ကို ၄ နာရီသုံးရင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ သုံးနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာကို ၅ဆ ချဲ့ကားပြီး အသေးစိတ် ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလှပြင်တဲ့နေရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်စေမှာပါ။
ကြိုး တပ်ဆင်ပြီး သုံးရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ရွေ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ အရမ်းအဆင်ပြေမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ မီလာလာမလာ သူကတော့ အားရှိသရွေ့လာနေမှာပါ။
မှန် ဆိုတာအရမ်းရေးပါပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ အရမ်းသတိထားရပါတယ်။ တွေ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ် မှန် က ၀ါးနေတာမျိုး ကြည့် လိုက်ရင် စောင်းနေသလို တွန့်နေတာမျိုး ။ ဒီမှာတော့ လုံးဝတွေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ၊ မှန် ရဲ့ အစွန်းမှာတောင် အဲဒီလို မဖြစ်စေပါဘူးလို့ အာမခံထားပါတယ်။
အရမ်းကြည်လင်လွန်းတာတော့ကိုယ်တွေ့ပါ။ အင်မတန်သန့်စင်ထားတဲ့ Aluminum နဲ့လုပ်ထားပြီး မိမိပုံရိပ်ကို ဒီလောက်ကြီကြီး ကြည်ကြည်လင်လင် မှန် မှာပြန် တွေ့နိုင်ဖို့ကို သေသေချာချာ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
တခါ အားသွင်းထားရင် ရက်သတပတ် ၅ ပတ် (တလကျော်) လောက်သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာလဲ မိမိ တရက်သုံးစွဲတဲ့ ပေါ်မှာမုတည်ပြီး အတိုးအလျော့ရှိပါလိမ့်မယ်။
မှန်ကို အတိုးအလျော့လုပ်လို့ရလို အပေါ်အောက် လှည့်လို့ရတဲ့အတွက် အလွန်အဆင်မှာပါ။
Simplehuman Sensor Mirror with 5x Magnification (290000 MMK)